Nagarik News - संघर्षको सहरमा सफलताको वर्षा
'मैले योभन्दा बढी पढाउन नसक्ने भएँ । अरू पढ्नुछ भने काठमाडौं जा, काम गरेर पढ्,' आठ कक्षा पढ्दै गरेका शम्भु श्रेष्ठ बाबुको यस्तो आज्ञा प्रतिवाद गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । मात्र मसिनो स्वरमा आफ्नो इच्छा जाहेर गर्छन्, 'एसएलसीसम्म त यहीँ पढ्न पाए पनि हुने, त्यसपछि काठमाडौं गएर जागिर खान्छु नि ।'
सेनाको जागिर छोडेर आएका बाबु निर्णय बदल्दैनन् । १० रुपैयाँ बाटो खर्च दिन्छन् र छोरा भेट्न जान लागेका दाजुको साथ लगाएर शम्भुलाई काठमाडौं पठाउँछन् । १४ वर्षमै उनी सहर छिर्छन्, 'भविष्य' बनाउन।
रामेछापको पकरबासबाट दुई दिन हिँडेर बनेपा । सवा दुई रुपैयाँ भाडा तिरेर बसमा काठमाडौं । साइकलसमेत नदेखेका श्रेष्ठलाई काठमाडौंको भव्यताले लोभ्याउँछ । २५ पैसाखाले बरफ खाँदा अनौठो मान्छन् । त्यसमा धेरै दिन भुल्न भने पाउँदैनन् । काठमाडौं टेकेकै दिनदेखि सुरु हुन्छ उनको संघर्ष ।
'कुनै काममा अनुभव नभएको श्रमिकले जे काम पाउँथ्यो, मैले त्यही गरेँ । भाँडा माझेँ, वेटर भएँ, पढाइचाहिँ अघि बढाउन सकिनँ,' बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डसहित दर्जन व्यवसायका 'मालिक' श्रेष्ठ सफलतामा सयर गरिरहँदा संघर्षका दिन बताउन अप्ठ्यारो मान्दैनन् । उनी 'संघर्षको सहर'ले दिएको सफलताको फोको फुकाउन थाल्छन् ।
ठूलोबाका छोरा कृष्णबहादुर जागिरे थिए । उनैले काम लगाइदिन्छन् भन्ने आशमा बाबुले काठमाडौं पठाए । तर, परिवारमा पहिलोचोटि एसएलसी पास गर्ने सम्भावना बोकेको भाइलाई काम गर्न पठाएको कृष्णलाई मन पर्दैन । 'हेर, यहाँ काम गरेर पढ्न सकिन्न । बरु कापी–कलम किनिदिन्छु घर फर्की, एसएलसी पास गरेर आऊलास्,' काठमाडौंको दुःख बुझेका कृष्ण शम्भुलाई सम्झाउन खोज्छन्, सक्दैनन् ।
'म जस्तो काम भए पनि गर्छु ,घर जान्न,' भन्दै ढिपी गरेपछि एउटा रेस्टुरेन्टमा काम लगाइदिनुभयो । आफू रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भएकोले उहाँको सम्पर्क अन्त थिएन,' दाइले भनसुन गरेपछि खिचापोखरीको अजित पञ्जाब रेस्टुरेन्टमा उनले काम पाए । तलब महिनाको ६० रुपैयाँ ।
उनी काठमाडौं छिरेको छ महिनापछि दसैं आयो । रेस्टुरेन्ट बन्द हुने भएकाले उनले घर जान छुट्टी पाए । बचाएको पैसाले नयाँ टिसर्ट र पाइन्ट किने । नयाँ लुगामा ठाँटिएर गाउँ जाँदाको फूर्ति नै बेग्लै ! धेरैले ठाने, शम्भुले प्रगति गरेछ । चर्को कामका कारण पढ्न नसकेको चाल पाएपछि उनका बाबुले गाउँमै पढाउन खोजे । तर, शम्भुले मानेनन् । 'म दसैं मान्नमात्र आएको हुँ, काम सुरु गरिसकेँ । सके पढौंला नसके जे होला, होला,' भन्दै उनी काठमाडौं फर्किए ।
उनी एकै ठाउँमा अडिएनन् । एक वर्षपछि नयाँ रेस्टुरेन्ट छिरे ।
पाँच वर्षमा उनले काम गरेको रेस्टुरेन्टको संख्या १५ पुग्यो । नयाँ ठाउँमा काम गर्दा तलब बढ्थ्यो । उनले त्यही अवसरको फाइदा उठाउँदै ठाउँ फेरिरहे । उनको मेहनतबाट प्रभावित भए, पाकोमा इन्द्र कवाब चलाउने साहू । त्यसैले शम्भुकै भरमा थापाथलीमा अर्को रेस्टुरेन्ट खोले । शम्भुको प्रोमोसन भयो । उनी त्यो रेस्टुरेन्टको म्यानेजर भए ।
'काम थालेको पाँच वर्षमा म्यानेजर भएँ, अब जीवन सहज हुने विश्वासका साथ विवाह गरेँ,' उनी भन्छन् ।
दुई वर्ष त्यहाँ काम गर्दा नजिकै कोल्डस्टोर चलाउने मुकुन्दप्रसाद आचार्यसँग उनको हिमचिम बढ्यो । विदेशी नागरिकले नेपाली ठिटोको श्रम प्रयोग गर्दै कमाएको आचार्यलाई मन परेन । उनैले शम्भुलाई हौस्याए, 'हेर इन्डियाबाट आएको मान्छेले तिम्रो सिप र श्रम प्रयोग गरेर पैसा कमाइरहेको छ । तिमी आफैं रेस्टुरेन्ट खोल्ने आँट किन गर्दैनौ ?' आचार्यले बारम्बार झक्झक्याएपछि शम्भुको दिमागमा पनि व्यापारी बन्ने सपना भरियो ।
'के गर्ने त मसँग पैसा छैन ?'
'तिमी र मेरो भाइ विन्दुप्रसाद मिलेर रेस्टुरेन्ट खोल, म सहयोग गरौंला,' आचार्यले जुक्तिसमेत निकालिदिएपछि उनी श्रमिकबाट व्यापारी बन्न तयार हुन्छन् ।
२०—२० हजार लगानी, तीन वटा टेबलको 'तन्दुरी कवाब' । २०४३ सालमा बत्तिसपुतलीमा उनको व्यापारको जग बस्यो ।
आफ्नो कामदार व्यापारी बन्न लागेको इन्द्र कवाबका साहूलाई मन पर्ने कुरै भएन। उनले छोरालाई लगाएर शम्भुलाई फर्काउने भरपुर कोसिस गरे । 'हामी नै तिमीलाई पार्टनरसिप दिऔंला, काम नछोड,' भन्ने साहूको छोरालाई उनले जवाफ दिए, 'गाँस छोड्नु, साथ नछोड्नु भन्छन् । साथीसँगै काम थालिसकेँ छोड्न मिल्दैन ।'
दुई वर्ष बित्यो, व्यापारले उकासेन । काम नछोडेको भए महिना–महिनामा तलब त आउँथ्यो भन्ने पछुतोले शम्भुलाई सताउन थाल्यो । 'त्यतिबेला २० हजारले आधा रोपनी जग्गा आउँथ्यो । त्यो पैसाले जग्गा किनेको भए कति जाती हुन्थ्यो भनेर विचलित भएँ,' पैसा डुब्न लागेकोमा चिन्तित भएको उनी बताउँछन् ।
उनी स्वयं दोधारमा थिए । साझेदार साथीले नयाँ प्रस्ताव ल्याए, 'म त यो व्यापार छोड्छु । कि तिमी चलाऊ, कि बेचौं ।' शम्भुलाई रेस्टुरेन्ट बेच्न मन लागेन । किन्न पनि सकेनन् । अनि गए पहिलोचोटि काम लगाइदिने दाइसँग परामर्श गर्न । दाइ जागिर नछोडीकन शम्भुको साझेदार हुन तयार भइपछि उनले साथीलाई बिदा गरिदिए, २० हजार बिस्तारै तिर्ने सहमतिमा ।
दाइसँगै एक कुकलाई पनि उनले पार्टनर बनाए । नयाँ ढंगले व्यापार विस्तार भयो । तीन वटा टेबलले ग्राहक थेग्न सकेन । उनले अर्को सटर पनि भाडामा लिए । व्यापार बढ्दै गएपछि उनले बुझे– कामदार हुनजस्तो सजिलो रहेनछ व्यापार चलाउन । धैर्य चाहिँदो रहेछ ।
रेस्टुरेन्टको शाखा कुपन्डोलमा विस्तार गरे । त्यो पनि राम्रोसँग चल्यो । तेस्रो शाखा खुल्यो न्युरोडमा । तीन जनालाई तीन रेस्टुरेन्ट भाग लाग्यो । पुराना साझेदार आचार्यले फेरि सहकार्यको प्रस्ताव गरे । 'थापाथलीको जुन रेस्टुरेन्टमा म पहिला काम गर्थें त्यसैको आडमा नयाँ घर बन्दै थियो । साथीले त्यहीँ रेस्टुरेन्ट खोलौं, म हेर्छु भने । कुनैबेला आफूलाई काम दिनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मन लागेन । उनले व्यापारमा भावनात्मक हुनु हुँदैन भनेर सम्झाए,' श्रेष्ठको व्यवस्थापनमा अचार्यले त्यो रेस्टुरेन्टको जिम्मा लिए । राम्रोसँग चल्यो ।
रेस्टुरेन्ट आउने ग्राहकको कमी थिएन । जन्मदिन र पार्टीका लागि अर्डर आउन थाल्यो । व्यापारिक चेतले भरिएका शम्भुले क्याटरिङमा भविष्य देखे । तन्दुरी र कवाब रेस्टुरेन्टबाट क्याटरिङमा पाइला चाल्न साझेदारहरूलाई राजी गराइहाले ।
नयाँ व्यवसायको नाम के राख्ने ? थरीथरीका प्रस्ताव भयो । 'यही राख्ने' भनेर सहमति भएन । गोलाप्रथाबाट नाम टुंगो लाग्यो– 'इन्द्रेणी क्याटरिङ' । व्यापारमा नयाँ–नयाँ रङ पछ्याउँदै गरेका शम्भुले इन्द्रेणीझंै सप्तरंगी व्यापारको सपना देख्न थाले ।
क्याटरिङले पनि गति लियो । अब उनलाई घर–घरमा गएर पाल टाँग्दै क्याटरिङको काम गर्नुभन्दा आफ्नै हल खोल्न पाए काइदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थाल्यो । उनले आलटाल गरेनन्। २०५५ सालमा गैरीधारामा इन्द्रेणी पार्टी प्यालेस खोले । राजधानीमा बैंक्वेटको बिगबिग भइसकेको थिएन । यसले पनि उनलाई सफलता दियो ।
'व्यापार राम्रोसँग चल्यो भने घरभेटीको वक्रदृष्टि परिहाल्ने । कि भाडा बढाएर, कि हटाएर दुःख दिए,' उनले आफ्नै भवनमा रेस्टुरेन्ट, सेमिनार हल, बैंक्वेट आदि खोल्ने सपना देख्न थाले । सडक छेउमा जग्गा खोज्न थुप्रै ठाउँ चहारे । बानेश्वरको मूल सडकमा आठ आना जग्गा भेटेपछि उनलाई त्यही ठाउँमा स्वप्न महल ठड्याउन उपयुक्त होलाजस्तो लाग्यो ।
'२०५८ सालमा आफ्नै भवन बनाउन त कस्सियौं, कसरी गर्ने केही आइडिया थिएन,' उनी सम्झन्छन्, 'कुमारी बैंकका सुनील मल्लसँग चिनजान थियो । उनैले ५० लाख ऋण स्वीकृत गरिदिए ।'
काठमाडौंमा 'इन्द्रेणी कम्प्लेक्स' बन्दै थियो । उनीहरू साई बाबाको आश्रम पुट्टपर्ती गएका थिए । 'साँझ त्यहीँको चौरमा बसेर कम्प्लेक्स भाडामा लगाउने कि, आफैं केही गर्ने भन्ने सल्लाह गर्दा इन्द्रेणी फुडल्यान्ड चलाउने निधो भयो,' उनी फुडल्यान्ड, पार्टी हल आफैं चलाउने योजना बोकेर फर्किए ।
फुडल्यान्डको व्यापार कम्प्लेक्सको तलासँगै बढ्यो । कम्प्लेक्स क्षेत्रफल आठबाट २० आनामा विस्तार भयो । सुनौलो इन्द्रेणी बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि संलग्नता बढाए । भन्छन्, 'आफ्ना कामदारलाई समस्या पर्दा सहुलियत ऋण दिन पाइन्छ भनेर ।'
इन्द्रेणी फुडल्यान्ड बानेश्वर र महाराजगन्ज, इन्द्रेणी फास्टफुड थापाथली, न्यु टेस्ट तन्दुरी टेकु र न्युरोड, इन्द्रेणी पार्टी प्यालेस बसुन्धरा र गैरीधारा र तन्दुरी कवाब कर्नर बत्तिसपुतली उनकै नेतृत्वमा चलेको छ । ३० वर्षअघि काम खोज्न काठमाडौं आएका श्रेष्ठ अहिले सात सय जनालाई रोजगार दिने हैसियतमा छन् ।
सफलतासँगै उनको सपनाको साइज पनि बढ्दै गएको छ । 'एउटा पाँचतारे होटल खोल्न साह्रै इच्छा छ ।' उनले यो सपनाको परीक्षण गर्न तीनतारे होटलमा संलग्नता जनाइसकेका छन् । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसहितका साझेदारसँग मिलेर गौशालामा 'होटल इन्द्रेणी हिमालय' खोलेका छन् ।
'छिटै पाँचतारे होटलको यात्रा अघि बढाउँथे होला सरकारी नियमले हतोत्साहि बनाएको छ,' उनीसँग गुनासो गर्नुका केही कारण छन् । भन्छन्, 'मापसे, बर्डफ्लु र पार्टीमा सीमित मान्छेमात्र बोलाउनुपर्ने नियम हाम्रो व्यापारको ठूलो रोग बनेको छ ।'
व्यापारबाहेक कुन चिजलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
कोटेश्वरस्थित घरमा कुरा गरिरहँदा उनले भने, 'सुत्दामात्र व्यापार सोच्दिन, तैपनि सपनामा त देखिहाल्छु !'
बल्ल उनको जीवनमा व्यापारबाहेक व्यायाम घुसेको छ । दुई घन्टाको लागि । '४० कटेपछि रोगले समात्छ भनेर धेरैले डर देखाए त्यही भएर क्लब जान थालेको छु,' उनी भन्छन् ।
गलामा पाँच तोलाको सिक्री झुन्ड्याएका छन्, हातमा मोटो ब्रासलेट । 'अरू कुरामा धेरै रुचि छैन । सुनचाहिँ गोविन्द कार्कीको संगतले लगाउन थालेको,' सुन र गाडीले उनको ध्यान धेरै तान्छ । रेन्ज रोभर चढिरहेका श्रेष्ठ 'दुःखका बेला बनाएको'ले नयाँ घर खोज्ने पक्षमा भने छैनन् ।
काठमाडौं छिरेदेखि रेस्टुरेन्टको खाना खाएका उनी अहिले पनि घरमा त्यति खाँदैनन् । 'अरूको मूल्य र गुणस्तर बुझ्न ननस्टारदेखि फाइभस्टार होटल गइरहन्छु,' उनको खानपिनलाई पनि व्यापारले नै नियन्त्रण गरेको छ । फुर्सद हुँदा जनसम्पर्क विस्तार गर्न रुचाउँछन् ।
'धेरै प्रगति गर्नुभएछ' भन्दा जवाफ दिन्छन्, 'खै के भन्ने, आफूभन्दा माथि अझै पनि कति छन् कति !'
यसले बुझाउँछ– उनी अझै प्रगतिको फड्को मार्ने ध्याउन्नमा छन् ।